Indostria sy varotra Shanghai Duxia
Plastika vita amin'ny plastika
PP tenona kitapo milina
Ahoana ny fomba hisafidianana milina mitsoka horonantsary PE / milina mitsoka horonantsary?
Fepetra fampisehoana fototra sivy amin'ny sarimihetsika plastika
Ireo raharaha mila fiheverana amin'ny asan'ny milina fanorahana
Ahoana ny fomba hiatrehana ireo loko sivy sarotra indrindra amin'ny milina fanontam-pirinty?
Rakipahalalana momba ny milina fanodinana Slitting Machine
famenoana masterbatch amin'ny fizotran'ny fitsofana horonantsary
Ny fizotry ny fitsofana horonantsary LDPE dia manana teboka fanaraha-maso efatra lehibe
Fampivoarana siantifika sy fanavaozana ara-teknolojia ny milina fanaovana kitapo plastika
Granulator plastika / fitakiana milina fanodinana plastika
Olana mahazatra amin'ny milina fanaovana plastika
Ny tsy fitovizan'ny milina fanontam-pirinty flexo sy ny milina fanontana gravure
Fiteny 108 eo amin'ny zoro havanana ambony
Ataovy ny milina fonosana tsara indrindra any Shina
Mamorona marika kilasy eran-tany!
Shanghai Duxia Industry and Trade Co., Ltd. dia orinasa mifantoka amin'ny famokarana milina fonosana plastika. Ny orinasanay dia niorina tamin'ny taona 2002 ary miorina ao an-tanànan'i Ruian, faritanin'i Zhejiang, eo amoron'ny ranomasina atsinanana Sina. Nanangana birao tany Shanghai izahay tamin'ny taona 2017. Ny orinasa dia manarona faritra mihoatra ny 3,000 metatra toradroa. Misy mpiasa maherin'ny 100 ary teknisiana mihoatra ny 10. Manana hery ara-teknika matanjaka izahay, fitaovana fanodinana sarotra, fomba fitiliana tanteraka, ary milina mitsoka horonantsary. Ny vokatra toy izany dia manana ny toetran'ny tahan'ny fikolokoloana ambany, ny fotoana fampiasana ela, ny fahombiazana avo, ny tabataba ambany sns, ary ny fitantanana kalitao sy serivisy momba ny siansa dia natoky ny mpanjifa.
Mikaroha bebe kokoa
Ny vokatra lehibe an'ny Shanghai Duxia Industry and Trade Co., Ltd.: milina mitsoka horonantsary, milina fanontana, milina fanaovana kitapo plastika, milina fanodinana plastika.
Ny vokatra fototra
Masinina fanaovana kitapo plastika
Ahoana ny fomba hisafidianana milina mitsoka horonantsary mety
Ny milina tsofina sarimihetsika dia milina iray izay manafana sy mandrehitra poti-plastika ary avy eo mitsoka ao anaty sarimihetsika. Misy milina mitsoka sarimihetsika mampiasa PE, POF, PVC, PP ho akora famokarana...... .
Ny fanontana pirinty flexographic sy ny fanontana gravure dia samy manana ny tombony ananany. Ny tombony azo amin'ny fanontam-pirinty flexographic dia: mety amin'ny fanontana fohy na fanontana ny vokatra ......
karazana kitapo plastika
Ireo karazana kitapo plastika (1) harona plastika polyethylene avo lenta. (2) Kitapo plastika polyethylene ambany tosidra. (3) Kitapo plastika polypropylene (4) kitapo plastika PVC ......
Fampidirana granulator plastika
Ny vatan'ny granulator plastika dia ny extruder, izay misy rafitra fantsom-panafody, rafitra fampitana ary rafitra fanafanana sy fampangatsiahana ......
Milina fanodinana plastika
Mpitantana varotra: Sasha Liu
Finday / WhatsApp: +8615221892684
Mpitantana varotra: Andre Xu
Cellphone / WhatsApp: +8613564398120
Facebook-F Twitter Google-Plus-h Youtube Instagram
© Zo rehetra natokan'i Shanghai Duxia Industry and Trade Co., Ltd.
Avelao ny mombamomba anao, hifandray aminao faran'izay haingana ny fivarotanay!